April 2022 - Shwe Sagar
ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက် နံဘေးနားမှာအမြဲရှိနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း..
aung myo hlaing | 30/04/2022
ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက် နံဘေးနားမှာအမြဲရှိနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း.. ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမရှိတော့ပေမယ့် ကလေးတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက် ဘဝကိုအကောင်းကြိုးစားရုန်းကန်ကာ အဖေလိုရောအမေလိုရောပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင်နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန် ဘေးနားမှာအမြဲရှိနေပေးတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို အလင်းပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းနဲ့ နန်းသူဇာကတော့ အရင်ကတည်းက သီချင်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကMy best best friend .Whenever I
Tom Boy တယောက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တောင် အားကိုးချင်စရာပုံစံမျိုးနဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ…
Tom Boy တယောက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တောင် အားကိုးချင်စရာပုံစံမျိုးနဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ… ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာလည်း စွယ်စုံရမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို live sale တွေမှာလည်းသူမတူအောင်ရောင်းချနိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကကြောငြာတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီးရတနာပစ္စည်းတွေကိုဆက်တိုက်ကိုနားရက်မရှိ live လွှင့် ရောင်းချပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင်မေပန်းချီကနှာခမ်းနီမလေးတွေတောင် ကြွေသွားနိုင်လောက်တဲ့ကောင်လေးပုံစံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုချပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ crd zawgyi ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ေမပန္းခ်ီကေတာ့ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာလည္း စြယ္စုံရမင္းသမီးတစ္လက္ျဖစ္သလို live
ချစ်ရသူနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေ ရုတ်တရက် အသိပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေသက်ခိုင်…
ချစ်ရသူနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေ ရုတ်တရက် အသိပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေသက်ခိုင်… ပရိသတ်ကြီးရေ မေသက်ခိုင်ကတော့တစ်ခတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို​မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဖူးဖူးလေးကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ် တွေပါသဘောကျအားပေးဝန်းရံခံခဲ့ရသူပါ။ လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလျက်ရှိတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေထိုင်ကာ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ် သန်းနေတဲ့မေသက်ခိုင်ကတော့ပရိသတ်တွေအံအားသင့်စရာကိစ္စတစ်ခုကိုချပြခဲ့တာပါ။ အကြောင်းကတော့သူမအနေနဲ့ လက်ထပ်ပြီးကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်လာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေနဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဂုဏ်ပြုစကားတွေမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ပရိသတ်တွေလည်း မေသက်ခိုင်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအတွက်
မောင်ဖြစ်သူ ပြန်ဝင်စားသလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် ဖိုက်တင်မင်းသားချောလေး ဂျွန်ကိုနဲ့ ရုပ်ရောစိတ်ပါတူနေတဲ့သားဖြစ်သူအကြောင်းပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ နေထူးနိုင်ရဲ့ဇနီး မြသင်းချယ်….
မောင်ဖြစ်သူ ပြန်ဝင်စားသလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် ဖိုက်တင်မင်းသားချောလေး ဂျွန်ကိုနဲ့ ရုပ်ရောစိတ်ပါတူနေတဲ့သားဖြစ်သူအကြောင်းပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ နေထူးနိုင်ရဲ့ဇနီး မြသင်းချယ်…. မောင်လေးဖြစ်သူ ဂျွန်ကိုနှင့် စိတ်နေစိတ်ထားရောရုပ်ရောအကုန်တူတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်မြသင်းချယ်ကအိမ်ကအသက်အကြီးဆုံးလေးကသူ့မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လေးတကိုင်ကိုင်နဲ့,.ကိုကိုနဲ့မာမား ကိုယ်သားရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် တဲ့ သူ့မမတွေကိုလဲ မမဆု မမသင်း ဘာမှမလုပ်နဲ့လက်ဆေးတော့သားရေခဲမုန်ဝယ်ကျွေးမယ်လာလာ တဲ့ သူ့မမသင်းက ငယ်ရယ် မမသင်းရေခဲမုန့်မစားချင်ဘူး မသင်းကိုသွားတိုက်ဆေးဝယ်ပေးနော် ဆိုပြီးမောင်နှမတွေတိုးတိုးလုပ်နေကြတယ်., အောက်ကဆိုင်ရောက်တော့ မမသင်း သွားတိုက်ဆေးယူမှာလား ယူလေ ရေခဲ့မုန့်လဲယူ
အမိုက်စား မင်္ဂလာဦး အရိုဆုံး ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလာကာ မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေအသည်းကို ခွဲလိုက်ပြန်တဲ့ အဆိုတော် ထက်ယံ…
အမိုက်စား မင်္ဂလာဦး အရိုဆုံး ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလာကာ မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေအသည်းကို ခွဲလိုက်ပြန်တဲ့ အဆိုတော် ထက်ယံ… အဆိုတော်ထက်ယံကတော့အမိုက်စားအသံပါဝါနဲ့အတူတေးသီချင်းကောင်းများစွာကိုတီဆိုထားပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်အဆိုတော်ထက်ယံကမင်္ဂလာဦးဓာတ်ပုံအသစ်လေးတွေကိုအခုလိုပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်ထက်ယံရဲ့မင်္ဂလာဦးဓာတ်ပုံအသစ်လေးတွေကိုအခုလိုစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ crd zawgyi အဆိုေတာ္ထက္ယံကေတာ့အမိုက္စားအသံပါဝါနဲ႔အတူေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာကိုတီဆိုထားၿပီးပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္အဆိုေတာ္ထက္ယံကမဂၤလာဦးဓာတ္ပုံအသစ္ေလးေတြကိုအခုလိုျပန္လည္မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။အဆိုေတာ္ထက္ယံရဲ႕မဂၤလာဦးဓာတ္ပုံအသစ္ေလးေတြကိုအခုလိုစာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ အဆိုေတာၳက္ယံေကတာ့အမိုကၥားအသံပါဝါနဲ႔အတူေတးသီခ္င္းေကာင္းမ္ား်စာကိုတီဆိုထားၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕ခၥၡင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ျိထားတဲ့အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာကၸဲ္ဖစၸါတယ္ေနာ္။ အခုတစၡါျမာဆိုရင္အဆိုေတာၳက္ယံကမဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလို္ပႏႅၫၼျ္ေဝလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။အဆိုေတာၳက္ယံရဲ႕မဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလိုစာဖတၸရိတ္သတ္ႀကီးမ္ားအၾတက္္ပႏႅၫၱငၦက္ေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။ အဆိုေတာၳက္ယံေကတာ့အမိုကၥားအသံပါဝါနဲ႔အတူေတးသီခ္င္းေကာင္းမ္ား်စာကိုတီဆိုထားၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕ခၥၡင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ျိထားတဲ့အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာကၸဲ္ဖစၸါတယ္ေနာ္။ အခုတစၡါျမာဆိုရင္အဆိုေတာၳက္ယံကမဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလို္ပႏႅၫၼျ္ေဝလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။အဆိုေတာၳက္ယံရဲ႕မဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလိုစာဖတၸရိတ္သတ္ႀကီးမ္ားအၾတက္္ပႏႅၫၱငၦက္ေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။ အဆိုေတာၳက္ယံေကတာ့အမိုကၥားအသံပါဝါနဲ႔အတူေတးသီခ္င္းေကာင္းမ္ား်စာကိုတီဆိုထားၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕ခၥၡင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ျိထားတဲ့အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာကၸဲ္ဖစၸါတယ္ေနာ္။ အခုတစၡါျမာဆိုရင္အဆိုေတာၳက္ယံကမဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလို္ပႏႅၫၼျ္ေဝလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။အဆိုေတာၳက္ယံရဲ႕မဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလိုစာဖတၸရိတ္သတ္ႀကီးမ္ားအၾတက္္ပႏႅၫၱငၦက္ေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။ အဆိုေတာၳက္ယံေကတာ့အမိုကၥားအသံပါဝါနဲ႔အတူေတးသီခ္င္းေကာင္းမ္ား်စာကိုတီဆိုထားၿပီးပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕ခၥၡင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ျိထားတဲ့အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာကၸဲ္ဖစၸါတယ္ေနာ္။ အခုတစၡါျမာဆိုရင္အဆိုေတာၳက္ယံကမဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလို္ပႏႅၫၼျ္ေဝလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။အဆိုေတာၳက္ယံရဲ႕မဂလၤာဦးဓာတၸဳံအသစ္ေလးေၾတကိုအခုလိုစာဖတၸရိတ္သတ္ႀကီးမ္ားအၾတက္္ပႏႅၫၱငၦက္ေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။
သားဖြစ်သူ သီဟအောင်နဲ့အပြိုင်လန်းနေတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေ သဘောကျနေရတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦးတို့ သားအဖပုံရိပ်များ…
aung myo hlaing | 29/04/2022
သားဖြစ်သူ သီဟအောင်နဲ့အပြိုင်လန်းနေတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေ သဘောကျနေရတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦးတို့ သားအဖပုံရိပ်များ… အက်ရှင်ကားတွေထဲမှာ အထိုးအကြိတ်တွေကို အသားပေးရိုက်ကူး ရတဲ့ ဖိုက်တင်ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေထဲမှာ မင်းသားတွေနဲ့အပြိုင် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေကို လူတို င်းပဲသိ လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုလူချောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗီလိန်ကာရိုက်တာတွေကိုလဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ခေတ်စားတဲ့အချိန်ကတည်းက လူကြမ်းသရု ပ်ဆောင်အဖြစ် အချိန်အတော်ကြာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့
လူတိုင်း အားကျနေကြတဲ့ သူမရဲ့ ဘုရင်မလိုဘဝမျိုးဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ကြောင်း အတုယူဖွယ်ပြောပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်…
လူတိုင်း အားကျနေကြတဲ့ သူမရဲ့ ဘုရင်မလိုဘဝမျိုးဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ကြောင်း အတုယူဖွယ်ပြောပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်… သူမဟာခုချိန်မှာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုရရှိထားတာမကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် ရင်သွေးလေးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ မိခင်လောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ live saleလေးတွေကလည်းအားပေးသူပရိသတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့သူ့ဘဝလေးကိုတော့ပရိသတ်တွေအားကျနေရတာပါ။ ခုမှာလည်း နောက်ထပ်အလုပ်သစ်လေးတစ်ခုအနနဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် ရတနာဆိုင်လေးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ အရမ်းရောင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့အောင်မြင်မှုတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ အလုပ်တွေအရမ်းကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘေဘီမောင်ကသူမအဓိကအောင်မြင်ချင်းလျိုဝှက်ချက်ကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်က”ဘုရင်မတစ်ယောက်လိုနေနိုင်ဖို့အစေခံတစ်ယောက်လိုအလုပ် လုပ်ပါ”ဆိုပြီးပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ crd zawgyi သူမဟာခုခ်ိန္မွာေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုဘဝေလးကိုရရွိထားတာမၾကာခင္ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ရင္ေသြးေလးကိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရတဲ့ မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕
ဖခင်ကို နေအိမ်ထိ လာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ် Live လွင့်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့သမီးလေး စံထိပ်ထားဦး.. သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးခန့်နိုင်ကိုစစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ညက ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ စံထိပ်ထားဦး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ live လွှင့်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖခင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ညက live လွှင့်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့စံထိပ်ထားဦးကို စစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ သမီးစံထိပ်ထားဦး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို သီခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိ​သေးပါဘူး။ပရိသတ်တွေကလည်း
မကြာမီ သူတို့ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာတော့မယ် ရင်သွေးရတနာလေးဟာ သားသားလား မီးမီးလားဆိုတာကို ဝမ်းသာအားရပြောပြလာတဲ့ ဗီဗာဟိန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ..
မကြာမီ သူတို့ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာတော့မယ် ရင်သွေးရတနာလေးဟာ သားသားလား မီးမီးလားဆိုတာကို ဝမ်းသာအားရပြောပြလာတဲ့ ဗီဗာဟိန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ.. ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ အဆိုတော်ဗိုဟိန်းကတော့ အနုပညာ သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာမြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းတွေကို သီဆိုရင်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သီချင်းများစွာနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဗီဗာဟိန်းကတော့ အနုပညာရှင်ေ တွဖြစ်ကြတဲ့အဆိုတော် ဗိုလ်ဟိန်းနဲ့ အဆိုတော်ဗိုလ်မဆိုတဲ့တေးသံရှင်တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပြီး
ချစ်သူလေး နေမကောင်းတာမို့ ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ အနွေးဓာတ်ပေးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်…
aung myo hlaing | 28/04/2022
ချစ်သူလေး နေမကောင်းတာမို့ ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ အနွေးဓာတ်ပေးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်… ပရိသတ်တွေအမြဲအားပေးချစ်နေရတဲ့ မတ်မတ်ကတော့သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေအများစုအားပေးခြင်းခံနေရတာပါ။ မိန်းကလေးတွေကပါ အားကျပြီးချစ်နေရသူဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ပရိသတ်တွေကိုအမိုက်စားပုံရိပ်တွေနဲ့အမြဲရင်သပ်ရှုမောအောင်လုပ်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကလည်း သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုချပြခဲ့ပြီးအံ့သြမှင်သက်ခဲ့ရတာပါ။ သူမရဲ့ကောင်လေးဟာလည်း ခုနောက်ပိုင်းပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုများလာတာပါ။ ခုမှာလည်း ပရိသတ်တွေကိုအားကျစေတဲ့ပုံရိပ်တွေတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာချစ်သူလေးကို ရင်ခွင်ထဲကိုထည့်ဖက်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုတောင်ရိုနေကြလဲဆိုတာကတော့အောက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအားကျလိုက်ပါဦးနော်။ crd zawgyi ပရိသတ္ေတြအၿမဲအားေပးခ်စ္ေနရတဲ့ မတ္မတ္ကေတာ့သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္အလွေတြေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလးေတြအမ်ားစုအားေပးျခင္းခံေနရတာပါ။ မိန္းကေလးေတြကပါ